Accumulator koronto: waxa ay yihiin, waxa ay yihiin iyo noocyada | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
koronto ku urursada
Jarmal Portillo | 06/04/2022 12:00 | Dhaqaalaha Guriga
Un koronto ku urursada Waa qalab raacaya mabda'a la mid ah kan unugga ama bateriga. Sida magaceeda ka muuqata, waa curiye awood u leh ururinta iyo kaydinta tamarta, kaas oo la isticmaali karo wax ka badan ama ka yar wakhti ka dib. Waxay kuxirantahay sida tamarta loo kaydiyo loona isticmaalo. Tani waxay ka dhigan tahay in aysan jirin kaliya kuleyliyeyaasha, waxay sidoo kale noqon karaan kuleyl, taas oo noqon karta kuleyliyaha kuleyliyaha korantada, pneumatic, hydraulic ama koronto ama qalabka biyaha.
Maqaalkan waxaan kuu sheegi doonaa waxa korontadu tahay, waxa sifooyinka ay yihiin iyo waxa loogu talagalay.
2 Noocyada korantada korantada
3 Maxay tahay koronto-ururiyaha?
4 Hawlaha dayactirka
Korontadu waa qalab u shaqeeya sida unug ama baytari. Waxa loogu talagalay in lagu kaydiyo oo lagu ururiyo tamarta hadhow la isticmaali karo. Waxaa la isticmaali karaa waqti ka badan ama ka yar iyadoo ku xidhan habka kaydinta iyo sida tamarta kaydsan loo isticmaalo. Maskaxda ku hay in ay jiraan noocyo kala duwan oo batariyaal ah, markaa mid ama mid kale ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan u tahay xaalad kasta.
Shaqadeeda ugu weyn waa inay ka dhigto qalab kale oo ku shaqeeya tamarta kaydsan, sidaas darteed waxay leedahay adeegsiyaal kala duwan oo aad u ballaaran. Tusaale ahaan, xarumaha shirkadda, kuwa ugu badan waa inay haystaan ​​baytariyada waaweyn oo kaydiya oo qaybiya korontada iyada oo loo marayo wareegyo kala duwan.
Nooc kasta oo ah ururiyaha korantada ayaa u shaqeeya si kala duwan iyadoo ku xiran nooca tamarta tamarta korontada ee keydsan loo beddeli doono. laakiin kulligood waxay leeyihiin xoogaa isku mid ah. Ujeedadu waa in accumulator-ku uu kaydiyo tamarta ka dibna u beddelo nooc kale oo tamar ah oo la isticmaalo. Tusaale ahaan, kuleyliyeyaasha korantada waxaa loo isticmaalaa in lagu siiyo kuleyliyaha korantada guryaha iyada oo loo sii marayo hiditariyeyaasha korantada.
Noocyada korantada korantada
Waxaa jira dhowr nooc oo koronto aruuriya. Aan aragno waxay yihiin:
Ururiyaha sawir qaade: Qalabka cadceedda waxa uu ka soo ururiyaa tamarta falaadhaha cadceedda waxa uu ku kaydiyaa haanta kaydinta ee loogu talo galay. Tamartan waxa la isticmaali karaa wakhti kasta oo habeen iyo maalin ah iyada oo aan la helin shabakad dibadda ah si ay u kordhiso rakibaadaada ganacsi.
Kuleyliyeyaasha korantada: Waxaa loo isticmaalaa in lagu kululeeyo dhismayaasha leh hiwaayadaha korontada ku shaqeeya. Kuleyliyeyaasha kulaylka waxay isticmaalaan koronto si ay u dhaliyaan kulayl, ka dibna loo qaybiyo dhammaan qolalka. Mid ka mid ah faa'iidooyinkeeda aadka u muuqda ayaa ah in ay si ka dhaqso badan u kululaato aaladaha kale.
Ku-ururiyaha korantada: Kuleyliyaha isticmaala koronto si kor loogu qaado heerkulka biyaha taangiga. Biyaha kulul ayaa markaa galaya wareegga tuubooyinka waxayna gaaraan dhammaan qasabadaha guriga.
Maxay tahay koronto-ururiyaha?
Ujeedada baytariyada kaydinta korontadu waa inay ka dhigaan qalab ama qalab kale oo la shaqeeya tamarta kaydsan, taas oo macnaheedu yahay inay leeyihiin hawlo badan iyo adeegsigooda. Beteriyada yaryar waxay awood u yeelan karaan aaladaha yaryar sida taleefoonnada gacanta. Laakiin kuwa waaweyni waxay xamili karaan baabuurta iyo alaabta kale ee waaweyn.
Guriga dhexdiisa, isticmaalka baytariyadu sidoo kale way kala duwan yihiin. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa qalabyada waaweyn ee loogu talagalay in lagu kaydiyo oo loo qaybiyo korontada iyada oo loo marayo wareegyada kala duwan ee guriga.
Shaqada batteriga waxay ku xiran tahay inta badan nooca. Mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa raacaya mabaadi'da u gaar ah, oo ku salaysan nooca tamarta kaas oo tamarta korontada loo rogi doono. Si kastaba ha ahaatee, marka lagu daro shaqadooda, dhammaantood waxay raacaan dhowr tillaabo.
Furaha ururiyaha korantada ayaa ah awooda uu u leeyahay in uu kaydiyo tamarta. Waxay kaydisaa si ay hadhow ugu beddesho nooc kale oo tamar ah. Haddaba, korontadu waxa ay isu beddeshaa tamar kiimikaad, taas oo la kaydiyo ilaa inta loo baahdo ka dibna loo beddelo tamarta korontada si loo isticmaalo.
Anagoo tusaale ka qaadanayna hawlgalkan, waxaan u dhawaan karnaa nooca ugu badan ee ururinta guriga, kuleyliyaha korantada. Sidaa darteed, aad bay u fududahay in la fahmo sida batarigu u shaqeeyo. Xaaladdan oo kale, hiitarka korantada ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu siiyo kuleyliyaha korantada guriga.
Sidaa darteed, radiyeeriyaha ururiyaha korantada ayaa isticmaala tamarta koronto ee urursan si uu u kululeeyo gabal dhoobo ah ama aluminium ah, oo halkaas ka soo gaadhay dhammaan qolalka guriga. Maaddadu waxay kaydin kartaa kulaylka, markaa tamarta waxaa loo isticmaali karaa waqti dheer. Furaha si loo ogaado sida saxda ah batteriga ugu fiican ganacsigaaga waa fahamka ujeedada saxda ah.
Waa naadir in batarigu shaqada joojiyo, laakiin qalabkani maaha kuwo nacasnimo ah. Marka laga hadlayo korantada korantada ama nooc kasta oo kale oo guul darro ah, waxa ugu horreeya ee lagu hubiyo waa habka dibadda ee daadinta muuqda. In kasta oo inta ugu badan ee guuldarrooyinka qaybahan laga helo gudaha. Diidmada gudaha ka sokoow, waxaa jira cillado kale oo caadi ah sida iska caabiyeyaasha jabay ama wareeggii xumaaday.
Cilladahan oo dhan aad bay halis u yihiin oo sida keliya ee lagu xallin karaa waa in la waco farsamayaqaan xirfadle ah. Weligaa ha isku dayin inaad isticmaasho xeelado aad ku hagaajiso batari guri, waayo waxaad u badan tahay inaad ka sii dari doonto khaladka natiijaduna waxay noqon kartaa masiibo.
Qalabkan ayaa lagula talin karaa qof kasta. Tan ugu muhiimsan, kuwa raba inay kordhiyaan kaydkooda tamarta maalinlaha ah. Sidaa darteed, batteriga waxaa loo isticmaalaa in lagu kabo heerka takoorka saacaddii. U isticmaal wakhtiga ugu hooseeya ee batteriga si uu kaydkiisa ugu dallaco. Si loo sii daayo tamarta kaydsan inta lagu jiro maalinta. Baytariyadu waa walxo faa'iidooyin badan ku leh rakibaadda guriga. Waxay kuxirantahay nooca aad rabto iyo waxaad rabto inaad ku guulaysato adoo isticmaalaya.
Qof kasta, guri kasta, wuu rakibi karaa. Waxaas oo dhami waxay noo oggolaanayaan inaan keydinno tamarta oo aan dhimno biilasha korontada ama gaaska dhammaadka bisha sideenna ah. Tusaale ahaan, haddii aan haysanno kuleyliyaha gaaska ama saliidda, waxaan ku dhejin karnaa kuleyliyaha biyaha, ama radiyeer koronto, waxaan isticmaali karnaa koronto si aan u kululeyno biyaha ama hiitarka, halkii aan isticmaali lahayn kuleyliyaha gaaska, kuwani waa ikhtiyaari. Dadka qaarkiis waxay ku hayaan guriga, laakiin qaar kale way ka soo horjeedaan, iyagoo doorbidaya inay isticmaalaan gaas ama kuleyliyeyaasha naaftada si ay u kululeeyaan biyaha iyo hiitarka. Wax walba waa sax.
Si kastaba ha noqotee, haddii aan haysanno qalabka tamarta qorraxda ee gurigayaga, waxaa lagu talinayaa in lagu rakibo baytariyada sawir-qaadista. Tani waxay noo ogolaanaysaa inaan tamarta u kaydinno sida baytari, oo markaan soo saarno kayd, waxaan u isticmaali karnaa qorrax la'aan, sida habeenkii. Ama marka aan haysano isticmaal aad u baahan oo aan dooneynin in aan ku xirnaano shabakadda.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto waxa korontadu ay tahay iyo waxa loogu talagalay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Kaydinta tamarta » Dhaqaalaha Guriga » koronto ku urursada